China Calender Heat Press Machine sy mpamatsy | Asiaprint
1. Fampiharana midadasika: Azo ampiharina amin'ny fanontana hafanana sy ny fanontana fandefasana hatsiaka mangatsiaka.
2. Vokatry ny fanontana tsara: Ny vokan'ny fanontana famindrana dia tsara toy ny an'ny milina fanaovana hajia mafana.
3. Fanamafisam-peo avo lenta: ny tabilaon'ny rindrina lehibe sy ny roofin-tsoroka rehetra dia nohamafisina sy namboarina tamin'ny asa.
4. Pneumatika pression, tsindry azo fehezina mora foana.
5. Firafitra mety: Ny fanamboarana ny rafitra famahanana sy ny fampinonoana, ny fifindran'ny taratasy sy ny lamba mifanitsy sy marina, ny toerana masinina dia kely ny habaka, mamonjy asa.
6. Taratasy / Taratasy famindrana / Tsiambaratelon'ny taratasy mifehy ny tifiera fehezin'ny rivotra voafatotra.
7. Ny tsindry ambony sy ny hafanana ambony dia afaka mamindra ny lamina samihafa.
8. Ampiasaina amin'ny rafitra fanerena pneumatika azo ovaina, ahitsy ny tsindry arakaraka ny tsy itovizany.
Masinina No. JC-26B
Haben'ny takelaka fanafanana (CM) 120 * 21
Fampiasana Fanontana taratasy, mpanonta marika, mpanonta karatra, mpanonta lamba, mpanonta lamba
Karazana hafanana Masinina fanodinana hafanana mihodina
TOSIKARATRA (V) 220 / 380V
naoty naoty 9KW
Halavan'ny fotoana (S) 0-999
lanja (KG) 1000KG
Fonosana habe (CM) 204 * 114 * 155
Fanamarinana CE / SGS
Warranty: herintaona ny fotoana fiantohana. Nesorina ny ampahany akanjo haingana. Rehefa tapitra ny daty fiantohana dia omena ny serivisy fikojakojana ny fiainana.
Item fandoavam-bola: Manaiky ny 30% T / T ho depsoite sy ny 70% T / T mandanjalanja alohan'ny fandefasana. T / T, Western Union, fandoavana antoka amin'ny varotra Alibaba. Ho an'ireo baiko latsaky ny 1000USD, dia manaiky izahay handoa PayPal.
Fanamarinana CE: Ho an'ny vokatra rehetra dia manana mari-pahaizana CE.
Fametrahana: Mandefa installatoin injeniera ho an'ny milina oval mandeha ho azy, milina maodely hafa alefanay video sy antontan-taratasy hametrahana.
Manana ekipa matihanina aorian'ny varotra izahay izay afaka manome fampianarana video momba ny fanangonana milina sy famahana ny olan'ny milina an-tserasera 24 ora.
Fahaizan'ny famokarana avo lenta ary fotoana fohy fanaterana. Ampitahao amin'ny fotoana fandefasana ny milina fanodinana hafanana, mila mihoatra ny 20 andro ny namana, ary afaka mamita azy io ao anatin'ny 15 andro.
Miaraka amin'ny traikefa hatramin'ny 2001, Asiaprint dia nandalo am-polony taona lasa lasa mpitarika indostrialy amin'ny famolavolana sy fivarotana milina famindrana hafanana, milina fanontam-pirinty T Shirt, milina fanontana mafana, mpanonta printy Eco-solvent, mpanonta printy Dye Sublimation, sns.
Misy karazana departemanta isan-karazany, toy ny departemanta injeniera, departemanta fampandrosoana, sampana fanondranana, departemanta aorian'ny varotra, departemanta QC, sns. Ny sampana rehetra dia natokana hanomezana mpanjifa servisy tsara indrindra sy milina kalitao azo antoka. Izahay dia mifantoka amin'ny famoronana laminasa vaovao mifototra amin'ny fampiharana sy mifantoka amin'ny mpanjifa, indrindra ny vahaolana amin'ny fanontana sy ny fanaovan-gazety.
Ny traikefanay dia tsy mitovy amin'ny isan'ny vokatra atolotray ankehitriny, ary faly izahay niara-niasa tamin'ny masoivoho mpampiroborobo sasany, toa an'i Etazonia, Mexico, Thailand, Serbia, Vietnam sns.
Mampanantena anao ny Asiaprint fa ny fahafaham-ponao no ho tadiavinay, ary homena anao ny serivisy tsara indrindra amin'ny alàlan'ny haitao matihanina sy ny fitaovana voalohany. Asiaprint dia manantena ny hanana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra sy maharitra ary amin-kitsimpo amin'ireo sakaiza avy amin'ny faribolana rehetra.
Teo aloha: Machine milina fanaovan-tsolika fanafanana lamba
Manaraka: 1.7m Width Calendar lamba famindrana hafanana Machine Press
Logo Pneumatika Double Stations Heat Press Machine
Digital Printable Powder Pet Transfer Film DTF ...